Manohitra tanteraka ny mety ho fifanarahan’ny mpitondra Frantsay amin’i Madagasikara ireo Nosy ireo ny RN, ary nanitrikitrika fa an’i Frantsa ireo nosikely ireo, ary nanomboka ny taona 1970 no notakian’i Madagasikara. Nambarany fa manohitra tanteraka amin’ny heriny manontolo ny amin’ny fikitikitihina ny fiandrianam-pirenena Frantsay sy ireo ambarany fa taniny ataon’ny firenena vahiny, toy ny zava-nisy ny taona 2013 sy 2017 tao amin’ny Nosy Tromelin izy. Fanitsakitsahana ny andininy faha-5 amin’ny lalàmpanorenenan’izy ireo izany, ary anjaran’ny filoha no tokony hitandro azy. Manohitra tanteraka ny fanokafana fifampiraharahana amin’i Madagasikara momba ny fitantanana ireo nosikely ireo ny RN, araka io fanambarana io. Mitaky amin’i Emmanuel Macron ny handisoana ny voalazan’ny filoha Malagasy Andry Rajoelina tao amin’ny tambajotra facebook fa: “hahita hevitra momba ny fifampiraharahana sy famerenana ny “îles Eparses” ny roa tonta izy ireo. Midika io fa tsy hamerina mora an’io ny Frantsay, toa mampahatsiahy ny tenin’i Marc Ravalomanana tsotra sy nahitsy, fa mbola sarotra amintsika ny hiady an’ireo tanintsika ireo amin’izao tanjaka ara-toekarentsika izao. Teto amin’ny tanintsika ny Masoivoho Frantsay Véronique-Vouland no nidingin-drambo teny amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ny 15 oktobra 2015 fa azy, hono, ireo Nosy ireo. Mila mafy ara-toekarena sy miombona aloha ny Malagasy.